Mon, Oct 25, 2021 | 16:37:09 NST
Posted: Sunday, May 13, 2018 17:33 PM (3years ago )
यिनै युवाहरु हिजोसम्म जयजयकार गर्थे । आहा कस्तो राष्ट्रवादी नेता भन्थे । भारतसँग नझुक्ने मान्छे भनेर पुकार्थे । उनीहरुकै योगदानले चुनाव जितियो । सितिमिती कसैले हल्लाउन नसक्नेगरी कुर्सीमा बसियो ।
देशमा उथलपुथल पारेर विकासका मूल फुटाउने योजना छ । गरिबी हटाउने र आर्थिक समृद्धि गर्ने सपना छ । सपना साकार पार्न छिमेकीको पनि साथ चाहिन्छ । घरभित्रका सदस्यले पनि होस्टेमा हैंसे गर्नुपर्छ । होस्टेमा हैंसे गर्नुपर्ने तिनै युवाहरु अहिले खोक्रो राष्ट्रवादी भन्छन् । मोदीसँग झुक्न थाल्यो, लम्पसार पर्यो भनेर गाली गर्छन् ।
जनकपुर निस्कनुअघि ओलीले ऐनामा अनुहार हेरे । नाकाबन्दीको बेला ठाडो भएको नाक र अहिले मोदीलाई स्वागत गर्न खोज्दाको नाकमा उनलाई फरक लागेन । शीर पनि ठाडै छ, नाक पनि ठाडै छ । गालामा लतपतिएको राष्ट्रवादको रातो रंग पनि उत्तिकै लाल छ । आँखामा पहिलेभन्दा पनि धेरै आँट देखिन्छ । सबैथोक ठीक छ, तैपनि के मिलेन त ?
यताउता छामछुम गरे । खल्तीबाट मोबाइल निकाले । फेसबुक र ट्वीटरमा आलोचना मात्रै छ । आलुचना खानेबेला कति हेर्नु आलोचना ? मोबाइल बन्द गरे । कोठाभित्र पसेर एकछिन कुर्सीमा थचक्क बसेर भित्तामा हेर्न थाले ।
आउँछु भनेको पाहुनालाई कसरी अहिले नआइज भन्नु ? आफू पनि अस्ति भर्खर दिल्ली गएर आएको । आफू जाँदा तपाईं पनि आउनुहोस् है भनेर भन्नै पर्यो । निम्तो पाउनेबित्तिकै आइहाल्लान् भन्ने कसले सोच्यो र ? अस्ति फोन गरेर ‘ल म त आउने भएँ है’ भनिहाले । जनकपुर जान धेरै मन छ, पहिले पनि जान पाइएन, यसपाली त पहिले त्यतै आउँछु भनेपछि हुन्न भन्न पनि मिलेन ।
एकपटक उत्तरको छिमेकमा पुगेर फर्किएपछि दक्षिणका पाहुनालाई स्वागत गर्ने मन हो । तर उनको ढिपीको अघिल्तिर केही लागेन । आफूभन्दा उनी चतुर छन् । अप्ठेरो पार्नेगरी आउन लागेका भएपनि आउन लागेका पाहुनालाई बेवास्ता गर्न पनि भएन । उनको ठाउँमा पुग्दा आफूले सम्मान पाएजस्तै उनलाई पनि सम्मान र सत्कार गर्नै परिगो ।
अनि आफू भारतका विभिन्न ठाउँमा पुग्दा त्यहाँका नागरिकले अभिनन्दन गरेका हुन् । अनि मोदी आउँदा पनि अभिनन्दन गर्नै पर्यो । भेट हुँदा नमस्ते गरेजस्तो, जहाँ पुग्यो त्यहीँका मान्छेले अभिनन्दन गर्ने चलन । सरकारले गरेको पनि होइन, स्थानीय नगर र ठाउँका मान्छेले गर्ने हो । यस्तो चलनको नाम नै नागरिक अभिनन्दन । नागरिक झिकेर अभिनन्दन मात्रै भन्न पनि नमिल्ने ।
तैपनि मान्छेले कुरा बुझेनन् । विरोध गरेर उछित्तो मच्चाए । राष्ट्रवाद लम्पसार पर्यो भन्न थाले । हुन त आफू पनि अहिले सरकारमा नभएको भए यसै भनिन्थ्यो । विपक्षीले विरोध गर्ने त संस्कार नै हो । तर पहिले आफ्नो जय जयकार गर्ने युवाहरुले समेत आलोचना गर्दा पो चिन्ता बढेको छ त ।
तैपनि आफ्नो बाध्यता । आफ्नो ठाउँमा आएका पाहुनालाई दिल खोलेर स्वागत गर्ने संस्कार । बैगुनीलाई गुनले मार्नुपर्छ भन्ने मान्यता । शत्रुलाई पनि सम्मान गर्ने चलन । त्यसमाथि डाँडामा रेल कुदाउन, नदीमा जहाज चलाउन, घर भवनमा बिजुली बाल्न सबैथोक गर्न उनकै भर पर्नुपर्छ । अरुलाई त जसरी पठाए पनि हुन्थ्यो । तर सबैभन्दा नजिकका छिमेकीलाई त दूध दिने गाईको लात्तीजस्तो सम्झनुपर्छ । दुःख दिएपनि उही छिमेकी, बैगुनी भएपनि उही सहयोगी ।
जसले जे भनेर गाली गरेपनि मोदीको मन जित्नेगरी स्वागत गर्नु आफ्नो लागि मात्र होइन, देशकै लागि फाइदाको कुरा हो । मनले यति निचोड निकालेपछि ओली उठे । दराज खोले । लुगाको चाङमाथि दौरा सुरुवाल मात्र छ ।
प्रायः दौरा सुरुवाल मात्रै लगाउने बानी । जनकपुर जाँदा पनि के दौरा सुरुवाल लगाउनु ? यसै त त्यहाँका दाजुभाइले आफूलाई रीस गर्छन् । यसपटक पाइजामा लगाउनुपर्यो । मोदी पनि दंग, मधेसका आफ्ना दाजुभाइ पनि दंग । सुरुवाल थन्काएर पाइजामा भिरे । अनि मधेसवादी नेताहरुलाई समेत जिल पार्नेगरी जनकपुरमा देखिए ।
नेपालमा नाकाबन्दी गरेदेखि अहिलेसम्म नाकाबन्दीको न पनि नबोल्ने भारतका मोदी । अनि नाकाबन्दीको बेला दुःख पाइयो भनेर धेरै बोले पनि किन दुःख दिएको भनेर एकपटक पनि नसोध्ने नेपालका ओली । कहिले ओलीको रहरले त कहिले मोदीको रहरले बेलाबेला भेटवार्ता भैरहन्छ । यसपटक मोदीको रहरले जनकपुरमा दुईजनाको भेट जुर्यो ।
आफ्नै ठाउँ भए पनि ओलीलाई जनकपुर अलि दूर जस्तो भएको छ । मन भएपनि सजिलै जान पाईंदैन । त्यहाँका दाजुभाइले रीस गर्छन् । यसपटक मोदीकै लागि ओलीलाई जनकपुर जानुपर्ने भयो । ओलीको भन्दा मोदीको भर लाग्ने त्यहाँका अगुवाहरुलाई पनि ओलीको स्वागत गर्न कर लाग्यो । मन नभई नभई उनीहरुले मोदीको फोटोसँगै ओलीको फोटो पनि झुण्ड्याए । मोदीलाई जस्तैगरी ओलीलाई पनि अंकमाल गरे ।
जनकपुरमा ओलीको रुप देखेर एकछिन त मोदी नै अलमलिए । आफ्नो जस्तै जामा, आफ्नो जस्तै कुर्ता, आफ्नो जस्तै टोपी, आफ्नो जस्तै गम्छा । खुट्टामा लगाएको जुत्ता र खुट्टामाथिको ज्यानबाहेक अरु सबै दुरुस्त । हैन ओलीले के गरेका ? किन आफ्नो जस्तै लुगा लगाएका ? यसअघि त उनलाई यस्तो रुपमा कहिल्यै देखिएको थिएन ।
चतुर मोदीलाई कुरा बुझ्न अप्ठेरो भएन । तीन वर्षअघि नाकाबन्दी गरेर नेपालीलाई दुःख दिएको उनलाई सम्झना भयो । नेपालीलाई दुःख दिएर गल्ती गरेकै हो । तर अहिले आएर गल्ती गरें, माफ गर्नुहोस् भनेर भन्न पनि अप्ठेरो लाग्ने । ठूलो ठाउँको मान्छेलाई शीर झुकाउन पनि लाज लाग्ने ।
नाकाबन्दी गरेर नेपालमाथि बैगुन गरेपनि ओली आफ्नोजस्तै पाइजामामा सजिएर स्वागत गर्दै गुन तिर्न तम्सेका छन् । तपाईंको पाइजामाले मेरो लाज र बैगुन छोप्छु कसरी भन्ने ? मोदीले मुख खोल्न सकेनन् ।
न त ओलीले तपाईंको बैगुन छोप्न म पाइजामा लगाएर आएको हो भने । न त मोदीले नै मेरो बैगुन छोप्ने तपाईंको गुनलाई धन्यवाद नै भने । बैगुनीलाई गुनले ऋण तिर्न खोज्ने पनि चुप लागे । बेलाबेला बैगुन गरिरहने पाहुना पनि मौन बसे । पाहुनालाई नागरिक अभिनन्दन गरेको देख्न नसक्ने युवाहरु मात्र कराइरहे ।